बादले भण्डार (क्लाउड स्टोरेज) के हो? कसरी प्रयोग गर्ने? – MySansar
Microsoft ले दिने राम्रा सुबिधा मध्ये १ हो SkyDrive जसको अहिले नाम परिवर्तन भएर OneDrive भएको छ। यो तपाईको Hotmail (अहिले Outlook), LiveMail , संग जोडिएको हुन्छ जसले तपाईलाई सबैभन्दा बढ़ी5GB फ्री Space दिन्छ। यो सुबिधा प्रयोग गर्न तपाईसंग Hotmail (अहिले Outlook) वा LiveMail , ID हुनुपर्छ। तपाईको सुबिधा अनुसारको सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नुस, र install गर्नुस, windows PC मा सफ्टवेयर install भएपछि एउटा फोल्डर आएर बस्छ डेस्कटप मा(XP मा My Document र Vista /7 मा Users भित्र को तपाईको फोल्डर मा हुन्छ रूट फोल्डर ), फोल्डर को नाम OneDrive यसको icon चाही यसको logo हुन्छ। बस यतिमात्र हो अब तपाईले त्यो फोल्डर भित्र जून फाइल/फोल्डर राखे पनि इन्टरनेट छ भने आफै synchronize हुन्छ तपाईको SkyDrive मा। इन्टरनेट bandwidth हेरी ढिलो/चाडो हुनसक्छ। अपलोड भैसकेपछि प्रत्यक फाइल/फोल्डरमा हरियो टिक आउछ। अनि त्यो फाइल/फोल्डर हरु तपाईले मोबाइलबाट या वेबसाइटबाट हेर्न र डाउनलोड अनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छा।
Dropbox, Inc को Dropbox, पनि SkyDrive जस्तै सुबिधा भएको Cloud Service provider हो। Join भइसकेपछि डाउनलोड अप्सन आउँछ (मोबाइलमा पनि) एकपटक सफ्टवेयर Install भएपछि तपाईले OneDrive मा जस्तै फोल्डर देख्नुहुनेछ र उस्तै गरी फाइल/फोल्डर अपलोड गर्न सकिन्छ। technically DropBox अरुभन्दा राम्रो छ। तपाईँको कम्प्यूटर वा मोबाइलमा DropBox छ भने जुनसुकै फाइललाई dropbox मा लैजान राइट क्लिक गर्दा dropbox भन्ने अप्सन आउँछ, जसलाई क्लीक गरी सोझै dropbox फोल्डर लान सकिन्छ। पहिले नै dropbox मा भएका फाइल वा फोल्डर मा राईट क्लिक गारी dropbox अप्सनमा जानु भयो भने, Get link भन्ने अप्सन आउँछ जसलाई क्लिक गरेपछि त्यो फाइल या फोल्डरको लिंक आउँछ। त्यो लिंक ईमेल गरी साथीलाई पठाउन वा फेसबुक वा ट्वीटरमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि dropbox को सफ्टवेयर वा app इन्टरनेट चल्ने धेरैजसो मोबाइलको लागि उपलब्ध छ। यसले जम्मा 2GB मात्र फ्री storage दिन्छ तर अलिकति technique लगाएर अलि धेरै पाउन सकिन्छ। जस्तै – dropbox लाई Feedback दिँदा 150mb , ट्वीटर मा dropbox follow गर्दा 250Mb, ट्वीट गर्दा 150mb फेसबुकमा DrobBox शेयर गर्दा 250MB आदि पाउन सकिन्छ।
गुगलको प्रोडक्ट र मेरो लिस्टमा सबैभन्दा कान्छो २४ अप्रिल २०१२ मा जन्मेको गूगल Drive । यसको लागि गूगल ID (Gmail) छ भने यहाँ क्लिक गरी http://drive.google.com/ log on गर्न सकिन्छ। यसको पनि सफ्टवेयर र मोबाइल apps उपलब्ध छन्। यसको डाउनलोड/इन्स्टल पनि SkyDrive र Dropbox जस्तै हो, इन्स्टल गरेपछि डेस्कटपमा फोल्डर आएर बस्छ। अनि फाइल/फोल्डर हरु गूगल Drive फोल्डर मा Drag and Drop गर्न सकिन्छ। Google Drive का थप कुरा भनेको, तपाईले Google Drive को वेबसाइट भित्रै Documents(Word , Excel , Powerpoint Etc) बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि कम्प्यूटरमा MS Office हुनुपर्छ भन्ने छैन।
Apple को iCloud को बारेमा धेरै भन्नु पर्ने केही छैन। यसले पनि 5GB फ्री space दिन्छ। Apple को Device बाट फोटो, भिडियो, डकुमेन्टहरु यसमा राख्न सकिन्छ। यसैबाट एप्पल डिभाइसलाई लक गरियो भने हराएको एप्पल डिभाइस बेकम्मा बनाउन सकिन्छ।
(पहिलो पटक प्रकाशित 2012/08/20)
1 thought on “बादले भण्डार (क्लाउड स्टोरेज) के हो? कसरी प्रयोग गर्ने?”
uddhav Bhatta says:
धेरै धन्यवाद – यो जानकारीको लागि.